UbuntuCE: Ubuntu 2021.07.29 | အခြေခံဗားရှင်းအသစ် ၂၀၂၁.၀၇.၂၉ ကိုရနိုင်သည် Linux မှ
UbuntuCE: Ubuntu 2021.07.29 ကို အခြေခံ၍ ဗားရှင်းအသစ် ၂၀၂၁.၀၇.၂၉ ကိုရနိုင်သည်
Linux Post Install လုပ်ပါ | 02/08/2021 06:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 31/07/2021 00:33 | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
ရံဖန်ရံခါထိုအရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အစီရင်ခံရန်ကြိုက်သည် စီမံကိန်းဟောင်းများလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါတို့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့တဲ့ ယနေ့သည်လက်ဖြင့်အသစ်ပြုပြင်ထားသောလူများစွာအားလူသိနည်းသောဖြန့်ဝေမှုအလှည့်ဖြစ်လိမ့်မည် Ubuntu ကို 20.04မရ။ ပြီးတော့ဒါက GNU / Linux Distro ဒါဟာဟုခေါ်သည် "Ubuntu Christian Edition (UbuntuCE)".
"Ubuntu Christian Edition (UbuntuCE)" အင်္ဂလိပ်နာမည်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်aဖြစ်သည် GNU / Linux Distro အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် "Lခရစ်ယာန်အသုံးပြုသူများအတွက် Ubuntu ၏ပါဝါနှင့်လုံခြုံရေးကိုယူဆောင်လာသည်".
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုဘဲဒါကငါတို့စူးစမ်းတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ဘူး GNU / Linux Distroမရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်၎င်းအားအထူးသဖြင့်တစ်ခုကိုရည်စူးဖော်ပြခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အကြောင်းပြချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါလင့်များကိုချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ပြီးဆုံးပြီးနောက်စိတ်ပါဝင်စားသူများသည်ယခင်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည့်အရာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
"UbuntuCE ရှိတယ် (Ubuntu ခရစ်ယာန်ထုတ်ဝေမှု)OpenLP, Quelea, Xiphos, BibleMemorizer နှင့် BibleTime ကဲ့သို့သောခရစ်ယာန်ဘာသာများနှင့်နီးစပ်သော application များကိုကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့ပေးသော Ubuntu ကို အခြေခံ၍ ဖြန့်ဖြူးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤအပလီကေးရှင်းအများစုသည်သိုလှောင်ခန်းများတွင်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုသုံးရန် UbuntuCE သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤဖြန့်ဖြူးမှုသည်ခရစ်ယာန်တို့၏အတွေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ဖက်သောဆော့ဝဲအချို့တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။" Ubuntu အေဒီ - ဘာသာရေးအတွက်ဖြန့်ဝေခြင်း
Ubuntu ကို အခြေခံ၍ ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖြန့်ဝေမှုများ
တိုင်း distro ရှိပါတယ် ... ။
1.1 လောလောဆယ် UbuntuCE ဆိုတာဘာလဲ။
လောလောဆယ် UbuntuCE ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် developer များအဆိုအရ၎င်း၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းကိုလက်ရှိတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
"Ubuntu Christian Edition (UbuntuCE) သည်ခရစ်ယာန်များအတွက် ဦး တည်သောအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နာမည်ကျော် Ubuntu Linux ကိုအခြေခံသည်။ Ubuntu သည်ပြီးပြည့်စုံသော Linux အခြေပြု operating system ဖြစ်ပြီးလူထုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအထောက်အပံ့နှစ်ခုလုံးဖြင့်အခမဲ့ရနိုင်သည်။ UbuntuCE ၏ပန်းတိုင်သည် Ubuntu ၏ပါဝါနှင့်လုံခြုံမှုကိုခရစ်ယာန်များအားယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။"
ဤ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၎င်းသည်သက်တမ်းများစွာရှိပြီးသက်တမ်းတိုးမခံရသောနှစ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤမျှလောက်များစွာပင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည် DistroWatch လက်ရှိတွင်၎င်းအားမှတ်ပုံတင်ထားသည် ရပ်စဲခဲ့သည် သူမကိုရည်စူးသော၎င်း၏အပိုင်း၌ သို့သော်၎င်းတွင်အောက်ပါထင်ရှားသည့်အရာများစွာပါ ၀ င်သောသေးငယ်သည့်ဖော်ပြချက်တစ်ခုရှိသေးသည်။
"စံ Ubuntu applications များနှင့်အတူ Ubuntu Christian Edition တွင်ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးခရစ်ယာန်ဆော့ဝဲများပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင် Project Sword ကို အခြေခံ၍ Linux အတွက် Linux အတွက်ထိပ်တန်းကျမ်းစာလေ့လာမှုအစီအစဉ်ပါ ၀ င်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အဘိဓာန်များအပါအ ၀ င် GnomeSword တွင်ထည့်သွင်းထားသော module များစွာရှိသည်။ Christian Edition of Ubuntu တွင် Dansguardian ပါ ၀ င်သော web content များအတွက်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသောမိဘထိန်းချုပ်မှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။ Ubuntu Christian Edition အတွက်အထူးမိဘထိန်းချုပ်မှုဆက်တင်များကိုညှိရန် graphical tool တစ်ခုကိုလည်းတီထွင်ခဲ့သည်။ Ubuntu Christian Edition ၏ပန်းတိုင်သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို Linux သို့ယူဆောင်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ Linux ကိုခရစ်ယာန်များအားယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။" DistroWatch - Ubuntu Christian Edition
၎င်းတွင် web content filtering system ရှိသည်: UbuntuCE ကို OpenDNS FamilyShield နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ OpenDNS သည်မျိုးဆက်သစ်အကြောင်းအရာစစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်လုံခြုံသော DNS ကိုပံ့ပိုးပေးသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Host Minder ပါဝင်သည်Host Minder သည် UbuntuCE ၌စိတ်ထဲတွင်တည်ဆောက်ထားသောရိုးရှင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ system မှမလိုအပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာရေးဆော့ဝဲကိုပေးသည်သမ္မာကျမ်းစာအချိန်၊ Xiphos နှင့် Bibledit တို့ပါ ၀ င်သည်။
အသင်းတော်များအတွက်ဆော့ဝဲများပေးသည်: OpenLP နှင့် WP မှ Presenter အပါအ ၀ င်။
လှပသောနောက်ခံပုံများနှင့်အတူလာသည်- UbuntuCE သည်သင်၏ desktop ကိုသင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်လှပသောခရစ်ယာန်- နောက်ခံပုံများတစ်တန်နှင့်ပြည့်ကျပ်နေသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Ubuntu Christian Edition (UbuntuCE) သူတို့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသင်လေ့လာနိုင်ပါတယ် နေပြည်တော်.
တိုတိုပြောရရင် "UbuntuCE" ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤအဆင့်သစ်တွင်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုကတိပေးသည် နှစ်သက်စရာနှင့်အသစ်ပြုပြင်ထားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံဤမျက်မှောက်ခေတ်ကာလ၏အမြင့်တွင်၎င်းသည်စတင်တည်ထောင်ကတည်းကဖန်တီးခဲ့သောရည်ရွယ်ချက်ကိုမဆုံးရှုံးဘဲ၊ ဆိုလိုသည်မှာ "နိဌခရစ်ယာန်အသုံးပြုသူများအတွက် Ubuntu ၏ပါဝါနှင့်လုံခြုံရေးကိုယူဆောင်လာသည်".
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » UbuntuCE: Ubuntu 2021.07.29 ကို အခြေခံ၍ ဗားရှင်းအသစ် ၂၀၂၁.၀၇.၂၉ ကိုရနိုင်သည်